एनजीओको उत्पत्ति नै अहिलेको दुर्गतिः नागरिक अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डेको अनुभूति | Ratopati
‘नेतालाई दर्शक बनायौं, तर आफ्नो क्षमता जोगाउन सकेनौँ’
personडा. देवेन्द्रराज पाण्डे exploreकाठमाडौं access_timeअसार २४, २०७६ chat_bubble_outline0
म अहिलेको राजनीतिक वस्तुस्थितिबारे केही भन्न चाहन्नँ । अहिलेको वस्तुस्थिति, हामीले भोगिरहेको सामुहिक पीडा र भविष्यको चिन्ता र कतिपय कुरामा वर्तमानमै जुन चिन्ता छ, त्यो राजनीतिक गैरजिम्मेवारीपन, दिशाबोध नहुनु र नेतृत्वको चरित्रले गर्दा भएको सबैलाई थाहा भएको कुरा हो ।
त्यसलाई फेरि दोहोर्‍याएर काम छैन । आज म नागरिक आन्दोलनबारे आफूले जानेको केही सूचना प्रवाह पर्न आएको छु । नागरिक आन्दोलन जन्मनुको १० दिनअघिसम्म पनि नागरिक आन्दोलित भएर सडकमा उत्रिन्छौँ भनेर हामीलाई थाहा थिएन । हामी नागरिक आफ्नो अधिकारबारे सचेत र मुलुकको अवस्थाबारे चिन्तित थियौँ, विभिन्न थलोमा विभिन्न प्रयास गरिरहेका थियौँ ।
हामी आन्दोलनकारी भएर त्यसरी सडकमा उत्रिएर एक प्रकारले राजनीतिक पार्टीहरुको पनि अगुवाई पुग्यौँ । त्यो कुनै योजनाबद्ध थिएन । हामीले कुनै संगठन पनि बनाएका थिएनौँ । एक पक्षले जित्ने अर्को पक्षले हार्ने सम्भावना कम हुँदै गरेको स्थितिबीच चम्केको जनयुद्धको त्यस्तो अवस्थामा फसिरहेको जस्तो लागेको थियो मलाई ।
संसद विघटन र ज्ञानेन्द्रको हस्तक्षेप अधिनायकवादी शैलीमा देखिएपछि राजनीतिक दलहरु दोहोरो पीडामा थिए । त्यसो हुनमा तत्कालीन नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले लगायतका दलको कामदारवादी चरित्रको पनि हात थियो ।
त्यो अवस्थामा संसद विघटन र ज्ञानेन्द्रको हस्तक्षेप अधिनायकवादी शैलीमा देखिएपछि राजनीतिक दलहरु दोहोरो पीडामा थिए । त्यसो हुनमा तत्कालीन नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले लगायतका दलको कामदारवादी चरित्रको पनि हात थियो ।
उनीहरुले ०४८ सालदेखि त्यही (२०४६ सालको संविधान) संविधानले विभिन्न शक्तिलाई निर्धारण गरेको जिम्मेवारी निर्वाह गरेनन् । उनीहरुले मुलुक वस्तुगत, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृति विविधतालाई नजरअन्दाज नगरेर सम्बोधन गर्न सकेको भए, त्यो बेला हावा चलेको आर्थिक उदारवादी बन्दै नेपाली समाजको अर्थतन्त्रको वस्तविक अवस्थालाई नविर्सिदिएको भए हामीले न आन्दोलन गर्नुपर्थ्यो, न माओवादी जनयुद्ध फल्ने(फुल्ने अवस्था हुने थियो ।
जब जनतामा पीडाबोध हुन्छ, समाजमा अपहेलित र स्थान नपाएको भएको महसुस हुन्छ र आफ्नो सन्तानको भविष्य नदेखेर मानिस आक्रोशित हुन्छ । उसले विकल्प खोज्छ । त्यो विकल्पका रुपमा माओवादीले फल्नेफुल्ने अवसर पायो । त्यसैबेला हामीले अब के गर्ने त भन्ने छलफल गर्न थाल्यौं । माओवादीको मूल माग के हो त भनेर कुरा पनि गर्न थाल्यौं । हामीलाई लाग्यो, संविधानसभा भनेर माओवादीले ठिकै भनेका छन् । उसले जनताले संविधान बनाएर जनताको निम्ति जनताले शासन गर्ने कुरा गरेको थियो । त्यो माक्र्सवादी–लेनिनवादी कम्युनिस्ट कुरा होइन । त्यो प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिबाट जनताले आफ्नो संविधान बनाउने कुरा थियो । यो कुरा सात दललाई भेटेर सम्झाउन मन लाग्थ्यो । कहिलेकाँही माओवादीलाई भेटेर यो युद्धले देशलाई कहीँ पुर्याउने छैन, राज्यका र तिमीहरुका तर्फबाट थप मान्छे मर्नेमात्र हुन् भनेर सम्झाउन मन लाग्थ्यो । २०६१ साल माघअगाडि पनि हामी यसरी छलफल गरिरहन्थ्यौं । सात दल र माओवादी मिलिदिए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्थ्यो । यो विषयमा मेरा साथी श्याम श्रेष्ठको मूल्यांकनको अफिसमा हामी १०–१५ जम्मा भएर छलफल गरिरहन्थ्यौँ । त्यस्तै, डाक्टर द्वय भरत प्रधान सरोज धितालसँग पनि छलफल हुन्थ्यो ।
राजनीतिक दलको कायरत
संसद भंग भएको थियो तर सात दलले संसद भंग भएको नमान्ने, हाम्रो संसद छँदैछ भनेर हिँडिरहेका थिए । संसद बस्ने पनि भनिरहेका थिए । उनीहरु अहिले भोटाहिटीमा कहिले, रत्नपार्कमा जम्मा हुन्थे । तर त्यो अन्दोलन कहीँ पुगिराखेको थिएन । मलाई पनि त्यो बाटोबाट कही पुगिँदैन लाग्थ्यो । तर कता कता कहीँ पुगिदिए नि हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो ।
०६२ साउन एक दुई गतेको कुरा हो उनीहरुले ( राजनीति दल) प्रज्ञाप्रतिष्ठान भवनमा संसद बस्ने घोषणा गरे । मलाई खुसी लाग्यो । बिहान ११ बजे संसद बैठक बस्ने भनिएको थियो । म पनि एकजना साथी लिएर समयमै त्यहाँ पुगेँ । प्रज्ञाप्रतिष्ठानको गेटमा ताला मारेको छ । त्यहाँ प्रहरी पनि थिएन । एक जना गेटपाले थिए । गिरिजाबाबु मोटरमा आउनुभयो तर गेटमा ताला लाएको देखेर फर्किनुभयो । माधव नेपालले पनि त्यही गर्नुभयो ।
यो के विचित्र हो, एउटा प्रज्ञाप्रतिष्ठानको ढोका खोल्न नसक्नेले के संसदको ढोका खोल्न सक्छ ? त्यहाँ सांसदहरु पनि छन् तर छरिएका छन् । एक ठाउँमा भेला समेत भएका छैनन् । सामूहिक प्रयास केही छैन । म क्रान्तिकारी नहुँला तर यति त बुझेको छु । अनि उनीहरुको हर्कतले दिक्क लाग्यो ।
मलाई लाग्यो यो के विचित्र हो, एउटा प्रज्ञाप्रतिष्ठानको ढोका खोल्न नसक्नेले के संसदको ढोका खोल्न सक्छ ? त्यहाँ सांसदहरु पनि छन् तर छरिएका छन् । एक ठाउँमा भेला समेत भएका छैनन् । सामूहिक प्रयास केही छैन । म क्रान्तिकारी नहुँला तर यति त बुझेको छु । अनि उनीहरुको हर्कतले दिक्क लाग्यो । अब यसरी हुँदैन भनेर त्यो दिन एउटा बैठक राखेर हामी नागरिक अभियन्ता तात्यौँ ।
पार्टीहरुले प्रज्ञाभवनको ढोका खोल्लान्, आन्दोलन गर्लान्, हामीले समर्थन गरौँला, उनीहरुको अगुवाइमा परिवर्तन आउँला भनेर हामीले बस्ने होइन, हामीले नै अग्रसरता दिने बेला भयो भन्ने कुरामा बैठकमा भएकाहरु बीच एकमत भयो । अनि ‘लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलन’ भनेर बोर्डमा लेखौँ भन्ने कुरा भयो । तर यता निषेधित छ, उता निषेधित छ । अनि निषेधाज्ञा तोड्ने तयारी गर्यौँ । यो भूमि हाम्रो हो, हामीलाई खाली गर । जनतालाई आन्दोलनको लागि आव्हान गर्नेका लागि त्यो आन्दोलनको नाम ‘लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलन’को नाम दियौँ । अनि ०६२ साउन १० गते ब्यानरसहित नागरिक आन्दोलन सडकमा देखियो ।
यसबाट मैले सिकेको पाठ भनेको कुनै पनि आन्दोलन योजना बनाए जस्तो होइन । आन्दोलन सुनियोजित हुँदैन, स्वस्फुर्त हुन्छ । हाम्रो आन्दोलन पनि स्वस्फूर्त रुपमा भएको हो ।
पछि पनि हाम्रा एजेण्डा स्वस्फूर्त रुपमा निर्धारण हुँदै गए । त्यसपछि जुन कार्यक्रम, उद्देश्य ल्याएर हामीले आव्हान गर्यौँ, त्यसबाट आम जनता र बैद्धिक वर्गको पनि मन छोयो र समर्थन पायो । साथै कस्तो सोच, कस्तो उद्देश्य, कस्तो कार्यक्रम, कुन स्वार्थले, के कस्तो साधनले आन्दोलन भर्ने भन्ने हामीले विवेक पुर्याउन अति आवश्यक रहेछ । हामी अनुहार देखाउने केही मान्छे थियौँ । हाम्रो व्यक्तिगत स्वार्थ केही थिएन ।
सात दल र माओवादी भिडिरहने, बीचमा अर्कोले आएर हस्तक्षेप गरेर मुलुकलाई समेत हानी हुने काम गर्ने स्पेस बनेको स्थितिलाई फाल्नु थियो । अनि माओवादी र सात दललाई एउटा अग्रगामी एजेण्डाका साथ लोकतन्त्रको विधि अनुरुप अगाडि बढ्नका लागि सँगै ल्याउनु थियो । हाम्रो जेजति शक्ति थियो, त्यसमा लगाएको थियौँ ।
यसले आम जनतालाई आकर्षित गर्यो र देशैभरि हामीले साथ पायौं । साउन १० गतेको कार्यक्रम सफल भयो । तर हामी संगठन निमार्णमा लागेनौँ यद्यपि संगठन निमार्णको कुरा नउठेको होइन ।
मैलेपछि गाली नखाएको होइन , त्यतिबेला त्यत्रो नागरिक आन्दोलनको समर्थन थियो, संगठन बनाएको भएर हामीले चुनावमा लड्नु पथ्र्यो । हामी चुनाव जित्थ्यौँ भन्ने कुरा नआएको होइन । तर संगठन निर्माणले मतभेद पैदा हुन्छ भनेर नगरेको हो । नागरिकले हामीलाई असंगठित भएर मन पराएको हो भन्ने मेरो बुझाइ छ ।
नेतालाई दर्शक बनाइयो
हामी सत्ताकब्जा गर्न हिँडेका थिएनौं । त्यसैले, दलहरुलाई साथमा लिनैपर्ने थियो । हामीलाई राजनीति पार्टीहरुसँग सहकार्य गर्नैपर्ने थियो । पछि सत्तामा जाने उनीहरु नै थिए । हामी त नागरिक समूह मात्रै थियौं ।
दलहरुलाई अघि लाएर कहीँ पुगिँदैन भन्ने देखिइसकिएको थियो । पार्टीहरुसँग जनताको वितृष्णा थियो । हामी अप्ठेरोमा थियौं, पार्टीलाई हामीले छोड्न नमिल्ने, जनता पार्टी नचाहने । त्यसैले, हामीले एउटा जुक्ति लगायौं– नागरिकहरु बोल्ने र नेताहरुले सुन्ने ।
तर, दलहरुलाई अघि लाएर कहीँ पुगिँदैन भन्ने देखिइसकिएको थियो । पार्टीहरुसँग जनताको वितृष्णा थियो । हामी अप्ठेरोमा थियौं, पार्टीलाई हामीले छोड्न नमिल्ने, जनता पार्टी नचाहने । त्यसैले, हामीले एउटा जुक्ति लगायौं– नागरिकहरु बोल्ने र नेताहरुले सुन्ने ।
त्यसपछि हामीले बानेश्वरमा पार्टीका नेतालाई दर्शकदीर्घामा राखेर कार्यक्रम गर्यौं । मैले गिरिजाबाबुलाई भनेँ – गिरिजाबाबु हामीले यस्तो काम गरिरहेका छौं, तपाईंले कहिले नगरेको काम गर्नुपर्यो । उहाँले के भनेर सोध्नुभयो । मैले भनेँ जनता बोल्ने, तपाईंले सुन्ने ।
सुरुमा त उहाँले बुझ्नु भएन, तर राम्रोसँग बुझाएपछि हुन्छ भन्नुभयो । त्यहाँ गिरिजाबाबु, रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपालसहित सबै राजनीतिक दलका अधिकांश नेताहरु आउनुभयो । त्यहाँ श्रवण मुकारुङले ‘बिसे नगर्चीको बयान’ भन्ने कविता सुनाए, गन्र्धव (रुविन) भाइले सारंगी रेटेर क्रान्तिकारी शैलीमा गीत गाए, अर्जुन पराजुलीले हास्यव्यङ्ग्य शैलीमा कविता सुनाए । कृष्ण पहाडी, म लगायतले भाषण गर्यौं । यसरी पार्टीहरुलाई हामीले आन्दोलनमा ल्यायौं । यसपछि आन्दोलन देशव्यापी भयो । हामी पनि विभिन्न जिल्लाहरुमा जान थाल्यौं । ललितपुर, भक्तपुर र कीर्तिपुरमा पनि बृहत् कार्यक्रम हुन थाले । हाम्रो कार्यक्रम पनि गजबको थियो । वक्ताहरु पनि एक सय एक थिए । कृष्ण पहाडीलगायतको धँुवादार भाषणले जनमानसलाई निकै तताउँथ्यो । योबीचमा पार्टीहरुले पनि जनताको सहभागिता र साथ पाए । सात दलका नेताले पनि अन्तिम बिन्दुसम्मसँगै थिए । त्यसमा पनि युवा नेताहरु गगन थापा, रामकुमारी झाँक्रीहरु थिए । यस्तै नरहरि आचार्य, कृष्ण खनालहरु पनि निकै सहभागी हुन्थ्यो । अन्ततः ज्ञानेन्द्र पराजित भए र संसद पुनःस्थापना भयो । हाम्रो लक्ष्य संसद पुनःस्थापना मात्र थिएन ।
तस्विरः शालिग्राम तिवारी
हाम्रो काम सकियो भनेको नसकिँदो रहेछ । यसपछि हामीलाई अर्को संकट आयो । माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनु पर्ने । उनीहरुसँग भएको १२ बुँदे सम्झौता आदिका कारण दलहरुलाई सजिलो थिएन, तर हामीलाई भने शंका भइरहन्थ्यो । कताकता संविधानसभा नै तुहिने पो हो कि ? संविधानसभा नै तुहियो भने हामीले परिकल्पना गरेको राज्यको पुनर्संरचना के हुने हो ? समाजको रुपान्तरणको एजेन्डा के हुने हो ? काठमाडौं केन्द्रित राज्य व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नु थियो, दलहरुले नगर्ने हुन् कि भन्ने शंका भयो ।
त्यसपछि हामीले हाम्रो आन्दोलन जारी छ है भन्ने सन्देश दिएर वक्तव्य निकाल्यौं । हामीले भन्यौं– हाम्रो एजेन्डा संविधान सभा, राज्यको पुनर्संरचना हो । हामीले सडकमा कार्यक्रमहरु पनि पनि गर्न थाल्यौं । यस क्रममा नागरिक आन्दोलनलाई दुई कोणबाट प्रहार हुन थाल्यो । हाम्रा पार्टीहरुको अन्तरनिहित ध्येय भनेको यथास्थितिवाद नै हो । त्यसैले उनीहरुका लागि हामी एकाएक अग्राह्य भयौं ।
क्रमशः नागरिक आन्दोलन शिथिल हुँदै गयो । यसपछि पनि हामीले संविधानसभाको कार्यकालभरि कुनै न कुनै किसिमले दबाव जारी राख्यौं । तर, हाम्रो आवाज भने निकै कमजोर भइसकेको थियो । अहिले मलाई लाग्छ, हाम्रो आन्दोलन क्षय नभएको भए पहिलो संविधानसभाबाट नै हामी संविधान बनाउन लाउँथ्यौं र अग्रगामी एजेन्डा छोड्न दलहरुलाई दिने थिएनौं ।
अर्कातिर, ती पार्टीका युवाहरुले पनि साथ छोडिदिए । यसपछि क्रमशः नागरिक आन्दोलन शिथिल हुँदै गयो । यसपछि पनि हामीले संविधानसभाको कार्यकालभरि कुनै न कुनै किसिमले दबाव जारी राख्यौं । तर, हाम्रो आवाज भने निकै कमजोर भइसकेको थियो । अहिले मलाई लाग्छ, हाम्रो आन्दोलन क्षय नभएको भए पहिलो संविधानसभाबाट नै हामी संविधान बनाउन लाउँथ्यौं र अग्रगामी एजेन्डा छोड्न दलहरुलाई दिने थिएनौं । सामान्यतया तत्काल फेरि आन्दोलन गर्नुनपर्ने गरी संविधान बनाउन लगाउँथ्यौं । त्यसै आएको होइन, माओवादी जनयुद्ध छोडेर वार्ता गर्नका लागि । उनीहरुको पनि प्रयास होला तर त्यति मात्र होइन । माओवादीले जुन हदसम्म लोकतान्त्रिक पद्दति मान्न तयार थिएन, फेरि जनवादी क्रान्तिकै कुरा गरेर राज्यसत्ता एकहोरो रुपमा कब्जा गर्ने कुरा गर्थे त्यसलाई तह लगाउने सामर्थ्य हामीमा थियो ।
अन्य पार्टीहरुलाई पनि समावेशी राज्यका लागि कुन मधेसी, कुन पाहाडी, कुन दलित, कुन महिला, कुन जनजाति आदि कुराको भेदभाव नगरि नेपाल राष्ट्र जस्तो छ, त्यस्तै राज्य बनाउन लगाउन सक्थ्यौं । हामीले राष्ट्र एउटा राज्य अर्को हुँदैन भन्नसक्ने खुबी राखेका थियौं । त्यो गर्ने क्षमता क्षय भएका कारणले पनि संविधान बनेन, फेरि दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान बन्यो ।
त्यसमा पनि कताबाट के आयो, कसको हस्तक्षप भयो, देशी – विदेशीले के गरे ? कतिपयका लागि त्यो संविधान अपूर्ण भयो । यसमा पनि मलाई धेरै चिन्ता छैन । मुलुक लिगमा हिँडेदेखि त्यसलाई संशोधन गर्न गाह्रो छैन ।
यो आन्दोलनमा लाग्नु, अगुवाई गर्नुको कारण म निस्वार्थी वा जोगी भएर होइन । मेरो पनि आफ्नो आकांक्षा थियो, विकासले गति लिएको हेर्ने । कर्मचारी भएर हेर्दा पनि सकिएनँ, २०३६ सालमा जागिर छोडेर लाग्दा पनि भएन । २०४६ सालको आन्दोलनमा लाग्दा पनि भएन । अब त हुन्छ कि भनेर लागेको थिएँ ।
त्यो विकास भनेको अहिले भनेको जस्तो विकास होइन, समावेशी विकास हो । जसमा सबैको सहभागिता हुन्छ र प्रतिफलमा सबैको शेयर हुन्छ । तर, अहिले पनि त्यो गर्नसक्ने अवस्था बनेन ।
नागरिक आन्दोलन र एनजिओ करण
हामी कहाँ छिर्ने क्रममा एक दुई जना सहयोगी चाहियो । अनि नागरिक समाज एनजीओकरण हुन पुग्यो । पहिले एनजीओले शुद्ध विकासे काम गर्थे । केही नागरिक समाजका प्रतिनिधिको साथ पाएर उनीहरुले नागरिक समाजको चरित्र लिएर राज्य सत्तालाई दबाब दिने काम गर्न थाले ।
नेपाल ०४६ सालअघि नागरिक आन्दोलन भन्ने शब्द नै थिएन । त्यो ०४६ सालको नागरिक आन्दोलन सफल भएपछि जन्मिएको हो । त्यही बेला सोभियतसंघको विघटन भयो । अरु राज्यमा पनि विद्रोह हुन थाल्यो । अब कम्युनिस्ट ढल्यो भन्दै पश्चिमा जहाँ त्यही लोकतन्त्रिक हुने भयो भनेर खुसी हुन पुग्यो । उसलाई त्यतिले मात्र पुगेन । मानवअधिकार, नागरिक समाज भन्दै सबै ठाउँमा छिर्यो । अनि हामी कहाँ पनि छिर्यो ।
उनीहरुको स्रोत साधन बन्दै गयो । पछि गएर पार्टीको पनि आँखा लाग्यो र पार्टीकरण पनि भए । तर हामीलाई पनि ०४६ सालमै एनजीओ प्रवेश गर्छ कि भन्ने चिन्ता थियो । तर हामी सजग थियौं । हाम्रो छलफलमा एनजीओको मान्छेलाई प्रवेश हुन्थ्यो तर एनजीओलाई प्रवेश गर्न दिँदैन थियौं । अहिले एनजीओकरणलाई नियन्त्रण गरौैँ भनेर आवाज उठ्छ, तर आफैलाई नियन्त्रण गरिदिन्छ । एनजीओको उत्पत्ति नै अहिलेको दुर्गति हो ।
(सोमबार मार्टिन चौतारीमा आयोजित नागरिक आन्दोलसम्बन्धि अन्तक्रिया कार्यक्रममा नागरिक आन्दोलनका अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले राखेको विचारको सम्पादित अंश । प्रस्तुति: लोकेन्द्र भट्ट)